Nisoloky ho mpivarotra merkiora: efa nahazo 250 tapitrisa Ar hanaovana sorona ilay ramatoa | NewsMada
Par Taratra sur 21/06/2019
Voasambotry ny polisy misahana ny ady heloka bevava, sakelika fahefatra (BC4) ny ramatoa iray voarohirohy amina raharaha fivarotana merkiora hosoka. Olona telo no efa voasolokiny ary efa nahazoany vola 250 tapitrisa Ar, izay nolazainy fa hanaovana sorona…
Te ho miliaridera tampoka! Ny asabotsy lasa teo no tratran’ny polisin’ny BC4 teny Ampefiloha ity ramatoa malaza ratsy amin’ny fisolokiana avo lenta ity. fitoriana miisa telo sy fijoroana vavolombelona maro no efa voarain’ny polisy momba ity ramatoa iray milaza ho manana sy mivarotra merkiora ka maka volabe amin’olona. Nandritra ny famotorana nataon’ny polisy no nahafantarana fa efa hatramin’ny taona 2017 ity mpisoloky ity no naka vola tsikelikely tamin’ireo mpividy noreseny lahatra momba ity resaka merkiora ity. Tsy tonga saina rahateo koa ireo olona voasoloky manoloana ny fandresen-dahatra ataony ka manome ny vola izay tadiavin’ilay ramatoa mpisoloky. Nilaza ity mpisoloky ity, nandritra ny fanadihadian’ny polisy hatrany fa ireo vola alainy ireo dia hanaovana sorona maro isan-karazany fa raha tsy izany tsy mipoaka ny afera momba ilay merkiora. Raha tombanana, efa mitentina 250 tapitrisa Ar mahery ny vola lasany. Araka ny fifananarahany tamin’ireo mpividy ireo dia ny volana febroary 2019 lasa teo no tokony hanomezany ireo merkiora nampanantenainy, saingy tsy nisy akory anefa izany.
Nahitana fitaovana famitahany olona tao an-tranony…
Nanomboka teo dia narirarirany hatrany ireo olona nosolokiany ary tsy azo tamin’ny telefaonina finday intsony izy taorian’izay. Nametraka fitoriana teo anivon’ny polisin’ny BC Anosy ireo mpividy miisa telo voasolokiny. Nanokatra fanadihadiana ny polisy ka ny asabotsy antoandro teo izy no tratra tao an-trano fonenany eny Andavamamba. Fitaovana maromaro fampaisany amin’ny famitahana olona izay hosolokiny no hitan’ny polisy tao an-tranony nandritra ny fisavana. Niaiky izy fa tsy misy ilay merkiora fa entiny handrebirebena olona fotsiny izany. Anatra ho an’ireo olona tsy mbola tratra ity resaka merkiora malaza tato ho ato ity. Misy ireo te ho mpanan-karena tampoka dia mora jonoin’ny mpisoloky amin’ity “afera maizina” feno fisolokiana avo lenta ity. Aoka ho tonga saina amin’izay!